မိုးခါးရေသောက်ခြင်းနှင့် အပြောင်းအလဲ | Myanmar Digital News
May 20,2022 |08:06 |
သတင်းဆောင်းပါး - သိန်းထွန်း (IR)
မြန်မာစကားမှာ အများမိုးခါးရေသောက်လို့ သောက်တယ်ဆိုတဲ့ စကားရှိပါတယ်။ အဓိပ္ပာယ် ကတော့ သူများလုပ်လို့ လိုက်လုပ်တာကို ဆိုလိုတာ တွေ့ရပါတယ်။ စကားပုံအရဆို အများမိုးခါးရေ သောက်ရင် မိမိပါသောက်မှ အဆင်ပြေမှာမို့ မိမိ ကိုယ်တိုင် မနှစ်ခြိုက်ပေမယ့် အများနဲ့ မဆန့်ကျင် အောင် အများနည်းတူလုပ်ရတာလို့ ဆိုပါတယ်။
ပုံပြင်ထဲအရတော့ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာ မိုးခါး ကြီး ရွာလို့ လူတွေလည်း မိုးခါးရေကို သောက်မိကြ ပြီး ရူးသွပ်ကုန်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရှင်ဘုရင်နဲ့ ပုရောဟိတ်အမတ်ကြီးတို့ကတော့ ဗေဒင်နက္ခတ်အရ မိုးခါးကြီး မိုးတွေရွာမှာကို ကြိုသိ ထားလို့ ရေကောင်းတွေ ကြိုစုဆောင်းထားတယ်။ မိုးခါးကြီးတွေရွာတဲ့အချိန်မှာ အခြားသူတွေကတော့ မိုးခါးကြီးတွေသောက်ပြီး ရူးကုန်ကြပေမယ့် ရှင်ဘုရင်နဲ့ ပုရောဟိတ်ကတော့ ရေကောင်းတွေပဲ သောက်ကြလို့ မရူးဘဲ ကျန်နေကြတယ်။ မိုးခါးရေ သောက်လို့ ရူးသွားတဲ့သူတွေအကြားမှာ ကောင်း တာဆိုလို့ နှစ်ယောက်ပဲ ကျန်နေတယ်။ အဲဒီတော့ ရူးနေတဲ့သူအများက မရူးတဲ့သူ နှစ်ယောက်ကို အရူး လို့ စွပ်စွဲပါလေရော။ ကြာတော့ ဘယ်နေနိုင်မလဲ။ ဘုရင်နဲ့ပုရောဟိတ်လည်း နောက်ဆုံး အများနည်း တူ မိုးခါးရေသောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ဖိအားဒဏ်ကြောင့် သိသိကြီးနဲ့ မိုးခါးရေသောက်လိုက်ရတဲ့ သဘောပါပဲ။
ဒါပေမယ့် မိုးခါးရေသောက်တဲ့ အဓိပ္ပာယ်က ပုံပြင်ထဲကထက် ပိုကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ အဓိပ္ပာယ် အရဖြစ်ဖြစ်၊ နယ်ပယ်အရဖြစ်ဖြစ်၊ အကျိုးဆက်အရ ဖြစ်ဖြစ် ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ မိုးခါးရေသောက်တဲ့ ပုံစံတွေကို နယ်ပယ်တစ်ခုထဲမှာ တွေ့ရတာ မဟုတ် ဘဲ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ အစိုးရဆိုင်ရာအဖွဲ့ အစည်းတွေ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု၊ ဆေးပညာနယ်ပယ်၊ သိပ္ပံပညာ နယ်ပယ်၊ ပညာရေး၊ ဘာသာရေး စတဲ့နယ်ပယ်စုံမှာ တွေ့ရပါတယ်။
ပုံပြင်ထဲအရဆိုရင် ကိုယ်က မိုးခါးရေမသောက် လို့ မရူးပေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ဖိအားဒဏ် ဒါမှ မဟုတ် လွှမ်းမိုးမှုကြောင့် နောက်ဆုံးမှာ မိုးခါးရေ သောက်ရတာပါ။ ဒါပေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ဖိအား ဒါမှမဟုတ် လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ကိုယ် တိုင်က မိုးခါးရေကို မသိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သိလျက်နဲ့ နှစ်ခြိုက်စွာ သောက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဆိုရင်တော့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မသက်ဆိုင်တော့ဘဲ ကာယကံရှင်ရဲ့ ဆန္ဒနဲ့သဘောထားတွေနဲ့သာ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင် ပါတော့တယ်။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က လူအများလုပ် ကြလို့ကိုယ်လည်း လိုက်လုပ်လိုက်တာဟာ မိုးခါးရေ သောက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အများနည်းတူ မိုးခါးရေသောက်တဲ့ ပုံစံဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်း ဒါမှမဟုတ် သာမန် လူထုအတွင်း ယခင်ရှိပြီး ယေဘုယျလက်ခံထားကြ ပြီးတဲ့ တွေးခေါ်မှုပုံစံ၊ အမူအကျင့်၊ ပုံစံနဲ့ အစဉ်အလာ တွေကို လက်ခံခြင်း၊ ကျင့်သုံးခြင်းလို့ ဆိုပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာ အများနည်းတူ မိုးခါးရေ သောက်တာကို အစဉ်အလာတစ်ခုအနေနဲ့ ယုံကြည်ခြင်း၊ လက်ခံ ခြင်းနဲ့ ကျင့်သုံးခြင်းကို တွေ့ရပြန်ပါတယ်။ အစဉ် အလာဖြစ်နေတဲ့အတွက် မစွန့်လွှတ်ရဲတာ၊ မစွန့် လွှတ်နိုင်တာနဲ့ ကိုယ်တိုင်က မိုးခါးရေသောက်တဲ့ အစဉ်အလာကနေ မဖောက်ထွက်နိုင်တာကို တွေ့ရ ပါတယ်။
အစဉ်အလာဆိုရာမှာ သမားရိုးကျ အစဉ်အလာ တွေတိုင်း မကောင်းဘူးဆိုတဲ့သဘော မဟုတ်ပါဘူး။ ကောင်းတဲ့ အစဉ်အလာတွေရှိသလို ခေတ်နဲ့အံမဝင် တော့တဲ့ အစဉ်အလာတွေ၊ အကျိုးမပြုတော့တာတွေ၊ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေတဲ့ အစဉ်အလာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ မိုးခါးရေသောက်တာချင်း အတူတူမှာ ကိုယ်တိုင်က မိုးခါးရေသောက်မိမှန်းမသိ သောက်မိ တတ်ပါတယ်။ မြန်မာစကားမှာတော့ သူများ ယောင် လို့ယောင် အမောင်တောင်မှန်းမသိ မြောက်မှန်းမသိ လို့ဆိုပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်က မသိလို့ လုပ်လိုက်ခြင်း ပါ။ အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ ကိုယ်တိုင်က မိုးခါးရေ ကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ကြိုက်နေသူတွေကိုလည်း တွေ့ရပြန်ပါတယ်။
မိုးခါးရေသောက်တဲ့အလေ့တွေကို လူတစ်ဦးရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝ အစိတ်အပိုင်း အတော်များများမှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ မိုးခါးရေသောက်တဲ့ အချို့ လက္ခဏာတွေဟာ ကာယကံရှင်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် တွေ၊ အပြုအမူတွေနဲ့ စဉ်းစားမှုပုံစံတွေအပေါ် လွှမ်းမိုးနေတတ်ကြပါတယ်။ တွေ့ရတတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေထဲမှာဆိုရင် -
(၁) ဆန်းစစ်လေ့လာမှုမရှိဘဲ အချို့သော အတွေးအခေါ် အယူအဆတွေကို လက်ခံ ခြင်း၊
(၂) ကိုယ်မျှော်လင့်ထားတာတွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အခြားစိန်ခေါ်မှုရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေ မရှိခြင်း သို့မဟုတ် မရှာဖွေခြင်း၊
(၃) လူအများစုက တစ်စုံတစ်ခုကို မှန်ကန် တယ်လို့ ယူဆထားတာတွေကို ယုံကြည် ခြင်း၊
(၄) လူအများစုရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေ မှန်ကန်တယ်လို့ ယူဆထားခြင်း၊
(၅) တစ်စုံတစ်ခုဟာ ကျိုးကြောင်းဆီလျော် ခြင်းကြောင့် မှန်ကန်တယ်လို့ ရိုးရိုး သားသား ထင်မြင်ခြင်း၊
(၆) အစဉ်အလာ ဒါမှမဟုတ် အခွင့်အာဏာ ကြောင့် တစ်စုံတစ်ခုကို မှန်ကန်တယ်လို့ လက်ခံခြင်းစတဲ့ စရိုက်လက္ခဏာတွေကို တွေ့ရပါတယ်။
မိုးခါးရေသောက်တဲ့ အလေ့ကြောင့် ကိုယ်တိုင်နဲ့ လူမှုအသိုက်အဝန်းမှာ အကောင်း၊ အဆိုး အကျိုး သက်ရောက်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ မိုးခါးရေသောက် တဲ့ အလေ့တွေ၊ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုပုံစံတွေနဲ့ အမူ အကျင့်တွေဟာ သာမန်အားဖြင့် ဆန်းစစ်ဝေဖန်မှု မရှိတတ်ကြပါဘူး။ ဆန်းစစ်ဝေဖန်မှုမရှိတဲ့အတွက် မှားယွင်းတဲ့ အယူအဆတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လက်ခံမိတဲ့အခါ ပြဿနာတွေကို ကျယ်ပြန့်စေ တတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အများသဘောအတိုင်း လက်ခံတဲ့ အကျင့်တွေစွဲသွားရင် အကြံဉာဏ်သစ် တွေ၊ အမြင်သစ်တွေ၊ တွေးခေါ်မှုပုံစံသစ်တွေနဲ့ အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာဖို့ ပိုပြီး ခက်ခဲစေတတ်ပါ တယ်။ မိုးခါးရေသောက်တဲ့ပုံစံဟာ အပြောင်းအလဲ လုပ်ဖို့အတွက် အင်စတီကျူးရှင်းဆိုင်ရာနဲ့ လူမှု အသိုက်အဝန်းဆိုင်ရာ အဟန့် အတား တိုးလာစေတဲ့ အချက်တစ်ချက်အဖြစ် The Affluent Society စာအုပ်ရေးသားခဲ့တဲ့ ဘောဂဗေဒပညာရှင် John Kenneth Galbraith က ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ မိုးခါးရေသောက်တဲ့ ပုံစံ ကြောင့် အများရဲ့သဘောတူညီမှုကို နားလည် လက်ခံလိုက်လျောပေးတဲ့အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ချမှတ်နိုင်ပေမယ့် ပြဿနာ တစ်ရပ်ကို အဖြေရှာရာမှာဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း ရာမှာဖြစ်ဖြစ် အခြားမတူညီတဲ့ နည်းလမ်းတွေ၊ အယူအဆတွေနဲ့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့အတွက် အခက်အခဲဖြစ်စေပါတယ်။ ပုံသေကားကျ အတွေး အခေါ်၊ အယူအဆတွေနဲ့ မိုးခါးရေသောက်ပုံစံတွေ ကြောင့် ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့ နည်းလမ်းအသစ်တွေ ရှာဖွေဖို့ ဒါမှမဟုတ် ဖောက်ထွက်စဉ်းစားတွေးခေါ် ဖို့အတွက် အရည်အသွေးတွေကို ကျဆင်းစေပါ တယ်။
မိမိအနေနဲ့ ကိစ္စရပ်တစ်ခုကို သိပ်ထွေထွေ ထူးထူးမစဉ်းစားဘဲနဲ့ ယူဆချက်တွေကို အလို အလျောက်လုပ်နေတဲ့အကျင့် စွဲလာရင် မိမိဟာ မိုးခါးရေသောက်တဲ့ပုံစံမှာ နစ်မြုပ်သွားနိုင်ပါတယ်။ မိုးခါးရေသောက်တဲ့ အလေ့က အခြားသူတွေရဲ့ သဘောထားတွေနဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေအပေါ် ယုံကြည်တာကို အများအားဖြင့် အခြေခံထားတတ် ကြလို့ အဲဒီလိုယူဆချက်တွေဟာ တိကျခိုင်မာမှု မရှိနိုင်တာကို သတိပြုဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒီလို အခြေခံ ထားချက်တွေဟာ အမှန်တကယ်လိုအပ်ပြီး အတည် ပြုနိုင်တဲ့ အထောက်အထားတွေ မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် မှားယွင်းမှုတွေ၊ လွဲချော်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပြီး အဲဒီ အကျိုးဆက်တွေက ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထိခိုက် စေနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သတင်းနဲ့ အချက် အလက်တွေ မြန်မြန်ဆန်ဆန် စီးဆင်းနေတဲ့ နည်း ပညာခေတ်မှာ မိုးခါးရေသောက်တဲ့ အလေ့ကြောင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ပိုပြီးများပြားစေနိုင် ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မိုးခါးရေသောက်တဲ့ပုံစံဟာ အတွေး အခေါ်၊ အယူအဆနဲ့ အပြုအမူဆိုင်ရာ အပြောင်း အလဲတွေကို နောက်ပြန်ဆွဲစေတတ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ် ဒါမှမဟုတ် ပြဿနာရဲ့ဇာစ်မြစ်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် ချဉ်းကပ်ခြင်း ထက် အများစုရဲ့ သဘောထားပေါ်မှာ ရပ်တည် တတ်ကြလို့ အပြောင်းအလဲဖြစ်ဖို့ ခက်ခဲစေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အများညီ ဤကို ကျွဲဖတ်သလိုပါပဲ။
မိုးခါးရေသောက်တဲ့ပုံစံဟာ ပြောင်းလဲလို့မရတဲ့ အလေ့တစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြောင်းလဲတယ်လို့ ဆိုရာမှာ မိုးခါးရေသောက်တဲ့ပုံစံကို လုံးဝပစ်ပယ်ဖို့၊ စွန့်လွှတ်ဖို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့နေရာနဲ့သူ သုံးတတ်ဖို့တော့ လိုပါတယ်။ နေရာတကာမှာ မိုးခါးရေသောက်တဲ့ အလေ့တွေ အမြစ်စွဲနေရင်တော့ တစ်ဦးချင်းမှာဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အသိုက်အဝန်း၊ လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာဖြစ်စေ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုလုပ် ဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး။
ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့သူတွေဟာ ပိုနေမြဲ ကျား နေမြဲအခြေအနေမှာ ဘယ်တော့မှ ကျေနပ်ရောင့်ရဲ မနေတတ်ကြပါဘူး။ သူတို့ဟာ “ဒါဆိုရင်ဘာလဲ” နဲ့ “ဘာကြောင့် မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲ” ဆိုတာကို အမြဲ မေးခွန်းထုတ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မိုးခါးရေ သောက်တာကို စိန်ခေါ်ဖို့ မတွန့်ဆုတ်တတ်ကြပါဘူး။ သူတို့အနေနဲ့ ရှိပြီးသားတွေကို ဖျက်ဆီးဖို့ဆိုတာ ထက် ပိုကောင်းအောင် လုပ်တတ်ကြပါတယ်လို့ အရောင်းရဆုံး စာရင်းဝင် Emotional Intelligence 2.0 စာအုပ်ရေးသားတဲ့ ထရာဗစ် ဘရက်ဒ်ဘာရီ က ဆိုပါတယ်။
မိုးခါးရေသောက်တဲ့ အလေ့တွေကို ပြောင်းလဲ တိုးတက်ဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်တာတွေ ရှိပါ တယ်။ အရင်က ကိုယ်ဘယ်လို စဉ်းစားတွေးခေါ်ခဲ့လဲ၊ ဘယ်လို ဆုံးဖြတ်ခဲ့သလဲ၊ ဘယ်လိုနားလည် လက်ခံ ခဲ့သလဲ၊ ဘယ်လို တိကျတဲ့ အထောက်အထား၊ အချက်အလက်တွေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်မှုဆိုင်ရာ ဖြစ်စဉ်တွေကို ဆန်းစစ် ကြည့်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဘယ်လိုအချက်တွေနဲ့ ထောက်ခံထားသလဲ၊ ကိုယ့် အယူအဆနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ အထောက် အထားနဲ့ အချက်အလက်တွေက ဘာတွေလဲဆိုတာ သိနားလည်မယ်ဆိုရင် မိုးခါးရေသောက်တဲ့ အလေ့ ကို ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်။ နောက်လုပ်နိုင်တဲ့တစ်ခုက ရှုထောင့်စုံကနေ စဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကို သုံးသပ်တဲ့အခါ ဘက်စုံအချက် အလက်တွေနဲ့ ထည့်သွင်းစဉ်းစားတာကလည်း နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို စဉ်းစားဖို့ အတွက် အခြားအယူအဆတွေကို အချိန်ယူ လေ့လာ ဆန်းစစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ လေ့လာဆန်းစစ်မှုကနေ အတွေးအမြင်သစ်တွေရရှိလာနိုင်ပြီး တိကျမှုလည်း ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ အတွေးအမြင် သစ်တွေရဖို့ အခြားသူများနဲ့ ဆွေးနွေးခြင်း ဖြစ်ပါ တယ်။ ပြဿနာတစ်ရပ်အပေါ် အတွေးအမြင်သစ် တွေရဖို့ အခြားသူရဲ့အမြင်တွေကို ဆွေးနွေးခြင်းဟာ အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အချက်အလက်နဲ့ အမြင်တွေကို ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။
အချို့အနေနဲ့ မိုးခါးရေသောက်တဲ့အလေ့ကို လွယ်လွယ်ကူကူ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လုပ်တတ်ကြတာကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ထွေထွေထူးထူး စဉ်းစားမနေ တော့ဘဲ လုပ်လိုက်တဲ့ သဘောပါ။ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ကြောက်ရွံ့တာ၊ စိန်ခေါ်မှုကို ရှောင်လွှဲလိုတာနဲ့ သက်သောင့်သက်သာလုပ်တဲ့ သဘောတွေလို့ ဆိုနိုင် ပါတယ်။ အမေရိကန်စာရေးဆရာ Neale Donald Walsch က ဘဝဆိုတာ သင်ရဲ့ သက်သောင့်သက်သာ အခြေအနေတွေ ကုန်ဆုံးတဲ့အချိန်မှာ စတင်ပါတယ် (Life begins at the end of your comfort zone.) လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီတော့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းမှာရှိတဲ့ အများစုက မိုးခါးရေသောက်တဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ၊ စဉ်းစားတွေးခေါ်တာတွေ၊ အပြု အမူတွေကို မပြောင်းလဲနိုင်ဘဲ ရောယိမ်းလိုက် ဘသားယိမ်းလိုက်လုပ်နေခြင်းဟာ ရေရှည်မှာ ပြောင်းလဲမှုတွေ၊ တိုးတက်မှုတွေလုပ်ဖို့ အခက်အခဲ ဖြစ်လာမှာကတော့ သံသယဖြစ်စရာ မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ် တွေအလိုက် ပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ဆိုရင် မိုးခါးရေ သောက်တဲ့ပုံစံတွေထက် စိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင် ဖို့၊ ဖောက်ထွက်တွေးခေါ်မှုတွေရှင်သန်ဖို့နဲ့ စိတ်ကူး သစ်တွေ ကွန့်မြူးလာဖို့ အားပေးမြှင့်တင်ကြရမှာပါ။
၁။ Kendra Cherry၊ What Is Conventional Wisdom? July 31, 2021